Zinedine Zidane oo go’aamiyay badelka Sergio Ramos ee kulanka Manchester City – Gool FM
Zinedine Zidane oo go’aamiyay badelka Sergio Ramos ee kulanka Manchester City
(Madrid) 06 Mar 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa go’aamiyay badelka kabtan Sergio Ramos ee kulanka lugta labaad wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League ay booqan doonaan naadiga Manchester City.
Kulankii lugta hore ee wareegan ayaa ka dhacay garoonka Santiago Bernabéu, wuxuuna ku soo idlaaday 1-2 ay ku adkaatay kooxda Manchester City, iyadoo kulanka lugta labaad lagu balansan yahay inuu ka qabsoomo 17-ka bisha Maarso garoonka Etihad.
Sergio Ramos ayaa kulanka soo aadan wuxuu ku maqnaan doonaa ganaax, kaddib markii uu qaatay kaarka casaanka ah Kulankii lugta hore ee ka dhacay garoonka Santiago Bernabéu.
Haddaba wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xiddiga reer Brazil ee Éder Militão kaasoo yimid Real Madrid xagaagii hore uu noqon doono badelka Sergio Ramos ee kulanka Manchester City, wuxuuna qeybta dhexe ee daafaca ku wehlin doonaa Raphaël Varane.
Ighalo oo si adag ugu jawaab celiyay dadka ka shakisanaa awoodiisa kooxda Manchester United
Macalin Ole Gunnar Solskjær oo ugu baaqay da’ayarta Man United inay wax ka bartaan Odion Ighalo